Yemen: Kamikazy Nanapoaka Baomba Nandritra Ny Famerenana Matso Nataon’ny Miaramila · Global Voices teny Malagasy
Yemen: Kamikazy Nanapoaka Baomba Nandritra Ny Famerenana Matso Nataon'ny Miaramila	Voadika ny 28 Mey 2012 7:53 GMT
Zarao: Olona teo amin’ny 100 teo no namoy ny ainy ary 200 farafahakeliny no naratra nandritra ny fanapoahana baomba nataon'ny kamikazy (olona manao sorona ny tenany) nikendrena miaramila nanao famerenana matso tao Sana renivohitr'i Yemen tamin’ny 21 Mey.
Nanapoaka ny baomba tany aminy teo afovoan’ireo miaramila nanao famerenana matso hankalazana ny faha-22 taona nitambaran’i Yemen Avaratra sy Atsimo ilay kamikazy (nanao sorona ny ainy), izay nitafy fanamiana miaramila.
Toa nanambara ny Al Qaeda (AQAP) fa tompon’andraikitra tamin’ny fanafihana, ho valifaty amin’i Etazonia ao atsimon’ i Yemen. Na dia izany aza, maro ireo Yemenita no nisalasala tamin’izany.
Mampiseho ny tohin’ny zava-tranga taorian’ny fipoahana tao amin’ny araben’i Sabaeen ao Sana ity lahatsary manaraka ity [TANDREMO: SOMARY MAHERY VAIKA NY SARY].
@tomfinn2: Tao Sabaeen. Nipitika eny rehetra eny ny polisy, niparitaka eraky ny lalana ny ratsam-batan’izy ireo. Nalefa eny amin’ny hopitaly kosa ireo naratra. ‪#yemen
@tomfinn2: Mbola mivezivezy ny fiara mpitatitra marary manodidina an’i Sana'a. Nilaza ny mpitsabo fa feno hipoka ny hopitaly. ‪#Yemen
Vaovao farany tao Yemen ny fandefasana sary tena mampihoron-koditra tao amin’ny twitter, sarin’ireo miaramila sasany maty nandritra ny fipoahana ny sary, Ibrahim Mothana nandefa rohy tao amin’ny Twitter misy ny sary.
@almuslimi: Andro mampivarahontsana ao ‪#Yemen ary fotoana fanararaotra ho an’ny filoha [Filoha Abdou Rabbo Mansour] ‪#Hadi izao mba handraisana fepetra henjana haingana amin’ny fametrahana rafitra ho an'ny miaramila indray.
Namoaka didy hitsivolana araka izany ny filoha Hadi taorian’ny fanafihana, nanolo ny tompon’andraikitra ambony ao amin’ny fiarovana, anisan’izany ny zana-dralahin’ny filoha teo aloha Ali Adullah Saleh.
@A4Mai: Fadhel AlQawsi no notendrena ho komandy vaovao eo anivon’ny etamazaoron'ny fiarovana araka ny didy hitsivolana noraisan’ny filoha ‪#Hadi ‪#Yemen
@A4Mai: Noesorina ny [zana-drahalahin’I Saleh]? Mety hiatrika loza ve isika manoloana izany didy hitsivolana vaovao izany? ‪#Yemen
@gregorydjohnsen: Ajanony ny tsaho azafady amin’izao fanafihana nitranga androany izao tao ‪#Yemen. Mino aho fa tsara ny miteny fotsiny hoe: “Tsy fantatro”
@A4Mai: Te hahita ny fanambaran’ny ‪#AQAP izay nilaza fa izy no tompon’andraikitra tamin’ny fanafihana nitranga tao ‪#Yemen
@Yemen4Change: ‪#Yemen | Toy izao ny teny: niakanjo fanamiana miaramila & nanao fehikibo feno baomba ilay nanao sorona ny ainy, TSY NISY OLONA NAHAMARIKA VE IZANY? ‪#Sanaa
@almuslimi: Nahoana no tsy nanampy tamin’ny fanomezam-baovao mikasika ny #AQAP ny #Saodita satria fantatra fa baomba natao ho an'i ‪#US ilay baomba? ‪#Fanontanianafotsinyihany ‪#YEMEN
@Hooria_Mashhour: Fanadihadiana mangarahara no tokony atao eo anatrehan’izao heloka bevava manitsakitsaka ny zon’olombelona ao ‪#yemen izao.
@WomanfromYemen: manàna saina masokatra hatrany & aza raisina ho marina foana izay voalaza. Aza maka tahaka toy ny olona sasany. Manontania & manaova fanadihadiana. Izany no nanomezana saina antsika.
Andro manjombona indrindra tao Sanaa sy Yemen tokoa ny andro nisian’izao fipoahana izao, mbola tsy nisy tahaka izao. Maro ny fanontaniana mipoitra mikasika ny fahombiazan’ny paikady hiadiana amin’ny asa fampihorohorona iarahan'i Etazonia sy Yemen, sy ny hanomezana fitokisana ny filazana fa tsy namokatra ny fanafihana an-habakabaka nataon’i Etazonia fa fihenjanam-pihetsika noho ny resaka lasantsy fotsiny.
Tantaran'ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana farany 18 ora izaySyriaFankahalambahiny atrehin'ny Syriana mpitsoaponenana iray mikasa ho any Eoropa
Vakio amin'ny teny عربي, বাংলা, Español, 日本語, Deutsch, English
Ady & FifandiranaMediam-bahoakaPolitikaVoina